Ukuqhaqhaza nokulondeka kwewebhu - Izinkinga Eziyigugu Ezivela Semalt
Ukukhohlakala kuba yinkinga evamile ebhekene nabasebenzisi abaningi be-inthanethi namuhla. Kubantu ababazuzayoAmawebhusayithi e-commerce, ukuhlala kude nabaqashi kungenye yezindlela ezingcono zokuqinisekisa ukuphepha kusayithi lakho. Noma kunjalo, sihluleka ukubeka lesi siciengqondweni lapho senza izinhlelo ze-web design yethu. Iningi lezohwebo ze-e-commerce ziyinhloko kumasu wokuthengisa oku-intanethi njenge-Search EngineUkuthuthukisa (SEO) kanye namasu wokumaketha okuqukethwe. Noma kunjalo, kubalulekile ukufaka ezinye izici zokuklama ukuzenzekelayoukuvikeleka kwabaduni. Izinyathelo ezinjalo zingaqinisekisa ukuphepha kwabanye kuzivakashi zakho lapho ziphequlula ngewebhusayithi yakho.
u-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt ,ichaza izindlela ezithile zokuqapha kanye nezindlela zokuzixazulula.
Asikho isimo esinikeza uhlelo lokufaka izinhlamvu ukuze kuqinisekiswe ukuzinza kwe-aisayithi. Kodwa-ke, kunezinye izinyathelo abantu abangazithatha futhi benze inqubo yonke iphephile. Ezinye zalezi zindlela zifaka okulandelayo:
Ukusebenzisa amaphasiwedi aqinile kubalulekile. Ungavimbela i-hacker ukuba ungeneiwebhusayithi yakho ngokusebenzisa amaphasiwedi aphephile. Amaphasiwedi afana no-12345 futhi amagama abantwana angakha ezinye iziphakamiso zomsebenzi wokuqagela kwanoma yimuphi umuntungenhloso engafanele. Ngenxa yalokho, kubalulekile ukusebenzisa amaphasiwedi okungekho muntu ongaqagela..Ukushintsha amaphasiwedi njalokungenza isilinganiso sokuvikeleka esengeziwe kwiwebhusayithi, kuthuthukise ukuphepha kwabo kakhulu. Kwesinye isilingo, umuntu angasebenzisa iphasiwedi ephephileama-generator ukwenza ukuphepha kwabo kuqine.
Ezinye zezindlela ezijwayelekile zokuqapha zidinga i-HTTPS elula ukuze ibambe. Umbhalo we-HyperI-Transfer Protocol Evikelekile yenza ukushintshaniswa okuphephile kolwazi phakathi kwesiphakeli sewebhu nesiphequluli. Le ndlela inikeza isendlalelo sokuphepha esiyingqayiziveleokuyinto i-hacks elula ne-spoofs ayikwazi ukungena. Ukuhlaselwa okujwayelekile ongaqeda ukusebenzisa i-HTTPS kufaka phakathi i-Cross Site Scripts kanye ne-SQLimijovo. Lezi zindlela zisebenzisa ukungabi khona kwekhodi yewebhu kanye nohlobo lweseva.
Ukupaka kanye nokuPhepha
Abagaxekile yiba bantu abathumela imilayezo eminingi ezenzakalelayo nama-imeyili ukuze bangaboni kahleizisulu. Isizathu sezinhlobonhlobo zalokhu kuhlaselwa ngokuvamile kuvamile, sidalule abantu abaningi ezandleni zabaduni. Amakholi amaningi e-intanethikwenzeka ngosizo lwabagaxekile. Ungashintsha kwiseva evikelekile ye-imeyli ukuze uzuze ukuvikelwa okuningi ngokumelene nama-imeyili amakhulu ogaxekile. Ngenyeamacala, ungakwazi ukuvimbela ukuhlaselwa kwale milayezo ngokusebenzisa izihlungi eziphambili ze-spam.
I-inthanethi inabantu abenza zonke izinhlobo zezinto. Umqondo omuhle wokwenza okuhlukahlukeneukulungiswa uma udala iwebhusayithi yakho. Abaqaphi bangasebenzisa ukukhubazeka okukhona kukho ikhodi yesayithi kanye ne-serverngokwayo. Ukuvikeleka kwewebhusayithi kanye neyabantu abayisebenzisayo kuxhomeke ekusebenzeni kwezinqubo zokulwa nokuqapha endaweni. NjengeUmphumela, kubalulekile kubo bonke osomabhizinisi ukuvikela inhlalakahle nokuphepha kokusetshenziswa kwe-intanethi kwiwebhusayithi yabo. Lo mhlahlandlela unezinyeamasu ayisisekelo angenza isayithi lakho lizuze izinzuzo eziningi. Ungenza izinguquko ezithile futhi uthuthukise ukuphepha kweisayithi lakho kakhulu.